ရှိပူရသေးကုန်မှအေး..ဆိုသလို..ရှိနာရသေးကုန်မှအေးဘဲ..ဆရာရေ။ အကုန်သာနှုတ်ပေးပါတော့....ဆိုတဲ့ လူနာတွေနယ်မှာတာဝန်ကျတုန်းက ခဏခဏတွေ့ဖူးပါတယ်။ သွားရှိလို့ရောဂါဖြစ်တယ်..သွားမရှိရင်ရောဂါဖြစ်စရာမရှိတော့ဘူး..ဆိုတဲ့ no teeth, no disease အယူအဆဖြစ်ပါတယ်။ သွားတွေတစ်ချောင်းပြီးတစ်ချောင်းပိုးစားရင်စား၊ ရေစီးကမ်းပြိုလိုသွားဖုံးရောင်ပြီးနဲ့တာနဲ့၊ ဘေးကိုယိုင်တာကယိုင်၊ စသည်ဖြင့် အတောမသတ်နိုင်တဲ့ သွားဒုက္ခတွေနှစ်ပေါင်းများစွာခံရတော့လည်း ဒီလိုအတွေးရောက်လာတာပါဘဲ။
အဖြေကတော့မပြီးပါဘူး။ နောက်ဆက်တွဲတွေအများကြီးဆက်လုပ်ဖို့လိုလာပါလိမ့်မယ်။ ပထမဆုံးသွားတစ်ချောင်းမရှိတော့ရင်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲကြည့်ရအောင်။
၁။ ရှေ့သွားဖြစ်နေခဲ့ရင် အလှပျက်ပါတယ်။ personality ထိခိုက်ပါတယ်။ လူရှေ့မှာ သွားပေါ်အောင်မရယ်ရဲတော့ဘဲဖြစ်လာပါမယ်။ စကားမပီသဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်လူတွေနဲ့ဆက်ဆံထိတွေ့နေရတဲ့သူတွေမှာ လူမှုရေးထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။ စွယ်သွားဖြစ်နေရင်တော့၊ နှုတ်ခမ်းတစ်ဘက်က နိမ့်သွားပြီး မျက်နှာအလှကို ပျက်ယွင်းစေပါတယ်။
၂။ (အံဆုံးကလွဲလို့) အံသွားဖြစ်နေခဲ့ရင်၊ အစာဝါးတာကြေညက်တာထိခိုက်ပါတယ်။ ဘယ်ဘက်အံတစ်ဖက်ကနှုတ်ထားရလို့ ဒါမှမဟုတ် အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဝါးမရလို့ ရှိရင် ညာဘက်အံနဲ့ဝါးဖို့ မသိစိတ်ကရွေးချယ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုတစ်ဘက်ထဲမှာ တောက်လျှောက်ဝါးတဲ့အကျင့်ရသွားရင်၊ ၀ါးတဲ့ဒဏ်တွေကို တစ်ဘက်ထဲက ခံရလို့၊ သွားတွေမှာအပိုဝန်ပိုထမ်းရတဲ့အပြင်၊ နှစ်ကြာလာရင် မေးရိုးဆစ်မှာ ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။
၃။ သွားတွေဟာအသက်ကြီးငယ်မရွေး နေရာအနေအထားရွေ့နိုင်ပါတယ်။ အသက်ငယ်လေ ရွေ့တာပိုမြန်လေဖြစ်ပါတယ်။ သွားတစ်ချောင်းထဲနှုတ်လိုက်ရတာ အရေးမကြီးပါဘူးလေ..ဆိုပြီး ပြန်အစားမထိုးဘဲထားရင်၊
(က) ဘေးကပ်ရက်သွားတွေက လွတ်နေတဲ့နေရာကို ယိုင်ဆင်းလာပါမယ်။ ယိုင်လာတဲ့အတွက် နဂိုက အကြားအလပ်မရှိစေ့နေတဲ့သွားတစ်ချောင်းတဲ့တစ်ချောင်းကြားမှာ၊ နေရာလွတ်ပေါ်လာပြီး၊ အစာစားတိုင်းသွားကြားညပ်လာပါမယ်။ အဲဒီကနေ သွားပိုးစားရောဂါ-သွားဖုံးရောဂါတွေ ဘေးသွားအကောင်းတွေမှာ စဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
(ခ) အပေါ်မေးရိုးကသွားတစ်ချောင်းလွတ်နေရင်၊ အောက်မေးရိုးမှာရှိတဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိဝါးရတဲ့သွားက ၊ ထိစရာသွားမရှိတော့ဘဲ အချိန်မဲ့အမျှ ရှည်ထွက်လာပါတယ်။ အောက်မေးရိုးမှာသွားတစ်ချောင်းမရှိရင်လည်း အလားတူပါဘဲ၊ အပေါ်သွားက ရှည်ကျလာပါတယ်။ အဲဒီလို သွားတွေနေရာပြောင်းတိုင်း သူ့ဘေးက သွားတွေနဲ့ထိစပ်မှုပျက်ယွင်းပြီး အစာညပ်လာရပါတယ်။
၄။ နှုတ်ထားတဲ့သွားနေရာက သွားဖုံးရိုးဟာ၊ နှစ်ကြာလာတာနဲ့အမျှ နိမ့်ဆင်းသွားပါတယ်။ နောင်တစ်ချိန်သွားပြန်အစားထိုးဖို့တောင်ခက်ခဲလာပါတယ်။
၅။ သွားအားလုံးမရှိတော့ရင်၊ သွားတွေကထောက်ပင့်ထားတဲ့၊ နှုတ်ခမ်း-ပါး စတာတွေချိုင့်ဝင်လာပြီး၊ အရေးအကြောင်းတွေမျက်နှာမှာပေါ်လာတဲ့အတွက်၊ လက်ရှိအသက်ထက်ပိုကြီးရင့်တဲ့မျက်နှာပုံဖြစ်လာပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အာဟာရဖြစ်မယ့် အသားတို့ အသီးအရွက်တို့ ကိုကြေညက်အောင်မ၀ါးနိုင်တော့လို့၊ အာဟာရချို့တဲ့မှုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အစာမကြေတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အထွေထွေကျန်းမာရေးပါထိခိုက်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် သွားတစ်ချောင်းထဲ-အရေးမကြီးပါဘူးဆိုပြီးပြီးစလွယ်ပစ်မထားသင့်ပါဘူး။ နှုတ်ရတဲ့အဆင့်မရောက်အောင်ထိန်းသိမ်းသင့်ပါတယ်။ မတတ်သာလို့နှုတ်ပစ်ရပြီဆိုလည်း၊ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အချိန်မှာ အချိန်မီပြန်အစားထိုးသင့်ပါတယ်။ နောက်ပို့စ်တွေမှာတော့၊ သွားပြန်အစားထိုးကုသမှုရွေးချယ်ပုံအကြောင်းကို ဆွေးနွေးပါဦးမယ်။
Posted by Dr. Nyan at 7:55 AM
မီးမီးကတော့ သွားမနှုတ်ပါ.. ပါးပိန်ကြီးဖြစ်မှာစိုးလို့.း))
Thanks for sharing. Good post. BTW, cute comment from Ma War. What'salovely couple?
တန်းဖိုးရှိတယ်ဗျာ.. နောက်မှ အေးဆေး လာမေးမယ် ရလားဗျ...။ ကျနော် မေးစရာလေး
ဘယ်အချိန်မေးမေး ကြိုဆိုပါတယ် အိမ်ရေ။
သွားကိုက်တာ အရမ်းခံရခက်ပါတယ်.. မခံစားဘူးသူ အမြင်မှာ ဟန်ဆောင်ကာ ပလီ နေသလို ပါပဲ။ နာနေတဲ့အချိန်မှာ ရှိပူနေရတယ် မရှိအေးရော ဆိုပီး နှုတ်ပစ် တတ်တာ
ကျနော် ကိုယ်တိုင်ပါပဲ.. လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၉ ခုနှစ်က အံတစ်ချောင်းနှုတ်မိပါတယ် သွားကြဲလာတယ်။ အစားအစာကို ကြေညက်အောင် ၀ါးဖို့ ခဲယင်းလာပါတယ်။
Orthodontic treatment လို့ခေါ်တဲ့သွားတွေကို ပြန်ဆွဲစေ့ပြီး၊ နှုတ်ထားတဲ့နေရာ ပြန်အစားထိုးလို့တော့ရပါတယ်။ တော်တော်လေးအကုန်အကျတော့များမယ်။